War Saxafeed – Madaxweynaha Puntland oo kulamo la yeeshay madaxda Ethiopia. – Radio Daljir
War Saxafeed – Madaxweynaha Puntland oo kulamo la yeeshay madaxda Ethiopia.
Seteembar 5, 2010 12:00 b 0
Adis Ababa, Sept 05 – Madaxweynaha Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed Dr. Cabdiraxman Maxamad Maxamud (Farole) oo booqasho ku jooga Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa maalintii afaraad halkaasi uga socdaan kulamo muhiim ah.
Xafiiska Warfaafinta: [email protected]
Labada dugsi sare ee Nawaawi (Bossaso) & Al-waaxa (Garowe) oo isugu soo hadhay finaalaha barnaamijka Tartan & Tacliin.
Duqa cusub ee magaalada Qardho oo xilkii la wareegay & Duqii hore oo la dardaarmay hogaanka cusub iyo golaha deegaanka.